Road to Freedom: လူကြမ်းမင်းသား
Posted by Nyein Chan Aung at 1:05:00 AM
ဒဗလျု အယ် said...
ဘာလဲ..။ ရေးပြီးမှ စော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူးလေး ဘာလေးနဲ့။ မရဘူး။ ရေးပြီးစလစ်ပဲ။ မှတ်ထားလိုက်ပြီ။ ကိုယ့်ဖာသာ တတိယနိုင်ငံထွက်ပြေးလာတာတောင် အေးအေးဆေးဆေးမနေရဘူး။
ဟစ်ဟော့သံပေါက်လို့ သုံးလိုက်တာတော့ ကြိုက်တယ်ဗျို့။ ကိုယောဟန်အောင်၊ အခု ခင်ဗျား၊ ကြိုက်တယ်ဗျို့။ ယုံယုံကြည်ကြည်ရေးပါဗျ။ ကိုယ့်စေတနာမမှားဘူးဆို နားလည်ကြမှာပါ။ ခင်ဗျားခံစားချက်တွေကိုလည်း ကဗျာဖတ်ရင်း နားလည်သွားပြီဗျာ။ တခေတ်လုံးကို ထင်ဟပ်နိုင်ပါပေရဲ့။
အင်း.. ဆရာဒဂုန်တာရာကတော့ ခင်ဗျားပြောသလိုပဲ ခေတ်မီလွန်းပေစွလို့ ပြောရတော့မှာပဲ။ တကယ်တော့ ဟစ်ဟော့ဟာ ဂီတကိုလည်း ဖျက်ဆီး၊ ကဗျာ့ဂုဏ်ရည်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးလို့ တချို့က စွပ်စွဲကြတာပဲ။ အရင် စတီရီယိုလိုပဲပေါ့ဗျာ။ ကြိုဆိုသူလည်းရှိ၊ ငြင်းဆန်သူလည်းရှိ။ ရေစုန်ဝင်မျှောတဲ့သူလည်းရှိ၊ တကယ်လေးလေးနက်နက် လုပ်သူတွေလည်းရှိပေါ့ဗျာ။
အသစ်တို့ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ အခုခင်ဗျားတို့ အားထုတ်မှုကလည်း အသစ်ဆိုပါတော့။ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
သတိထားမိတာက ဟစ်ဟော့မှာကော၊ အခု ဟစ်ဟော့သံပေါက်မှာကော အလင်္ကာတွေ ထူပြိန်းမနေ၊ တဦးမှ အခြားသူများစွာဆီ တိုက်ရိုက်သယ်ပို့ ကူးစက်စေတာပါပဲ။ လော်ရီကားကြီး ဖင်ထောင်ပြီး ကျောက်စရစ်ခဲ ကားတစီးစာလုံးကို သွန်ချလိုက်သလို တဖြောဖြောနဲ့အသံတွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ နားထဲမှာ ကြားလာရတယ်။
အခုခင်ဗျားကဗျာဟာ အတတ်ပညာလည်း မမဲ့သလို အဘိဓမ္မာလည်း မမဲ့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ခေတ်ပေါ်လွန်းပေစွ။
I like this poem Ko Nyein Chan Aung. Carry on bro.
March 4, 2008 8:50 AM
Blogger ~P~ said...
ဖက်ရတာ မိုက်တယ်...အကိုရေ.. :)
Blogger စိုင်းခမ်းထွန်း said...
ဟစ်ဟော့ မို့လား မသိဘူး ဖတ်လို့တော့ အကောင်းသားဗျ .....
Blogger Saung Yune La (aka) Way said...
March 4, 2008 11:33 AM
သံစဉ် ထည့် လိုက် ရင် ပြီး ပြီ :P
March 4, 2008 2:48 PM